थाहा खबर: बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको टिप्पणी : प्राथमिकता अस्पष्ट, कार्यक्रम छरिए
काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्राथमिकता स्पष्ट नभएको टिप्पणी गरेका छन्। २०४६ पछि संसदमा सबैभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेका महतले कार्यक्रम धेरै छरिनुले बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर गर्ने टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले प्राथमिकता निर्धारण नगरी चुनावमा बोलेका सबै कार्यक्रम अघि बढाइयो भन्ने सन्देश दिनलाई नाम उल्लेख भएको समेत बताएका छन्। मदन भण्डारी राजमार्गको अध्ययनबिना नै बजेट छुट्याइएको, रेलमार्ग र जलमार्गको विषय अध्ययनबिना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
चालू खर्च धेरै र पुँजीगत खर्च न्यून हुने सरकारको समृद्ध नेपालको नारा नारामै सीमित हुने महतको टिप्पणी छ। स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि गर्ने सवालमा पनि बजेटको ध्यान नपुगकै डा. महतल बताए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अनुदान बढी दिनुले अर्थमन्त्रालयलाई मजबुत नबनाउने उनको टिप्पणी रहेको छ। 'अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा र अनुदानको नाममा धेरै बजेट राखिएको छ, सामाजिक सुरक्षामा मात्रै १६ प्रतिशत बजेट छ', महतले भने।
उनले यसअघि कांग्रेसअघि सारेका केही कार्यक्रमको निरन्तरता र बजेटको उद्देश्‍य भने सकारात्मक रहेको बताएका छन्। कृषि यान्त्रिकीकरणमा छुट, स्वास्थ्य तथा कृषि बीमाको निरन्तरता बजेटको राम्रो पक्ष रहेको महतले बढाए। आन्तरिक ऋण बढाउँदा निजी क्षेत्रलाई असर पर्ने र यस्तो ऋण बढाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको लगानीमा प्रभाव पर्नेसमेत उनले बताएका छन्।
'आन्तरिक ऋण जिडिपीको अधिकतम पाँच प्रतिशत लिने हो', महतले भने, 'बढी ऋण उठाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा ध्यान नदिई अंक बढाउनलाई बढी ऋण मागियो।' उनले आन्तरिक ऋण बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रको रकम सरकारमा जाने र निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रभाव पर्ने पनि बताए।